I-Wikipedia yi-encyclopedia enokuthenjwa yamahhala e-intanethi, iprojekti ejolise ekudaleni umsebenzi wokusebenzisana kunye neyona encyclopedia enkulu kwimbali kunye nobungakanani, kunye ne-encyclopedia ngokwayo eyiphumo.
Le sayithi ayiyi kukuqinisekisa nantoni na. Abantu abandakanyekayo (kubandakanye nabanye abasebenzisi) kule ndawo abaxanduva lwakho nonke. Wena, sebenzisa le site (lokukhangela, iposi, kubandakanywa bonke re-ukusetyenziswa kwe yangaphandle) ukuba kunjalo, kufuneka wenze ngomngcipheko akho.
Asinalo uxanduva lomonakalo obangelwa ngenxa yokusebenzisa.
Xa ukukhanya imithetho nemimiselo isicelo sakho, ukusetyenziswa le sayithi akusosiqinisekiso sokuba yi esemthethweni.
Zonke isigwebo Ilungiselelwe umxholo, umfanekiso, ulwazi odiyo, semthethweni, ukuchaneka, ukhuseleko kunye ezifana umxholo, oko akusosiqinisekiso kuzo zonke iinkalo.
Asiqinisekisi nto malunga nesayithi yangaphandle edibanisa.
Zombini inqaku lonke, kodwa uya ilayisensi ukuguqulwa kunye kwakhona ukusetyenziswa-esekelwe kwi-mvume exananazileyo CC-BY-SA 3.0 kunye GNU Woxwebhu Free mvume, oko uya kukha mvume ngohlobo saphule imithetho nemimiselo kunye nezinye izenzo zomthetho.
Umfanekiso ngamnye oboniswe kunye kunye nesicatshulwa uya kunikwa ngokusekelwe kwilayisenisi eyahlukileyo kwisivakalisi.
Kukhona ithuba lokuyeka ukubonelela umxholo ngaphandle kwesaziso sangaphambili.
Last edited on 3 Eyo Mnga 2020, at 04:54
Eli khasi lagqityelwa ukulungiswa kwi-3 Eyo Mnga 2020, kwi-04:54